Ngathi - pump Sand, sump Pump, grabile Pump yoMvelisi
JP Metal & Equipment Co., Ltd yasekwa ngowe-2006, i enkulu professional abaxhakaxhaka pump kwimizi umenzi obandakanyeka ukuphanda ekuthumeleni pump oluludaka, ukuguga umhlwa izinto ukumelana kunye OEM processing. JP Iqela pump lugubungela ngaphezulu kwe 40000 square metres, ikomkhulu obhalisiweyo 18 million yuan. Ukutyhubela iminyaka yomelelani nincedwa ngamandla ingcamango -yokuziqhelanisa abantu-, siyazifunxa inani elikhulu yolawulo ophezulu ezikumgangatho kunye neziphiwo zobugcisa. kwabasebenzi abantu abangaphezu kwama-220, kubo 30% Technician. Ngapha koko, impompo JP iye igama njengoko brand yephondo ephambili adumileyo kunye lweshishini ezintsha yenzululwazi kunye nobuchwepheshe. ISO9001 kwaphunyezwa: 2008 inkqubo yolawulo lomgangatho, impompo JP wawongwa isihloko ogcino lwamandla Hebei kunye lweshishini ukhuselo lokusingqongileyo. Nokwandiswa obuqhubekekayo isikali, inkampani yethu iye yaba impompo oluludaka unikezelo isiseko likhulu kushishino efanayo Shijiazhuang.
impompo JP uneminyaka emininzi amava okusebenza kuphuhliso nokusetyenziswa nempompo oluludaka. Ngokusekelwe kulandelwe nokugcina advanced technology angaphandle, la manqaku imveliso yokusebenza ogqibeleleyo kuchaphazeleke iye yasekwa. Okwangoku, iimveliso eziphambili kuquka uthotho pump oluludaka, FGD zobunjineli pump ezizodwa, impompo igrabile, impompo Ukugrunjwa, impompo amagwebu, impompo iikhemikhali kunye ezintsha eziveziweyo DB irabha. Amakhulu imifanekiso, esisetyenziswa ngokubanzi kwi kwemigodi, yokunyibilikisa isinyithi, ukuhlamba yamalahle, ugesi, desulfurization igesi ulwelo, Ukugrunjwa, ubunjineli amanzi, petroleum kunye imichiza kwezoshishino, ulawulo kamasipala, ukhuselo lokusingqongileyo, unyango amdaka kunye namanye amashishini.
indawo yethu imveliso ligubungela ummandla we 24000 square metres, amandla iyonke ukuveliswa ophumayo wonyaka iiyunithi 10000 (iiseti), kwaye imveliso yazo zonke iintlobo chromium eliphezulu castings ingxubevange lonyaka 2000 tons.The indawo yemveliso wohlulwe kwizithili amahlanu indawo enye amaziko ezimbini, ezizezi ngumngundo eyahlulayo, unyango ubushushu, machining ocoliweyo, izobangela ukuwelda kunye nebandla enamathela yemimandla ezintlanu zemveliso; abaza kuzisebenzisa Kugqityiwe! Uhlalutyo umgangatho experiment amanzi. Eyona impahla kweemveliso: A05, A49, A33, A51 kunye nezinye chromium eliphezulu emhlophe kwesinyithi.
Uphuhliso design product kunye nokulungiselela inkqubo yamkela CFD kunye CAPP technology. Uvavanyo Ukuchaneka ukungcola eliphezulu isikhululo test xi ukuya ngqo kwinqanaba ISO9906, ukuxhasa ezahlukeneyo izixhobo ophezulu-ngqo uvavanyo, izixhobo zohlalutyo eziwisela on.All ukuze amkele izakhi kunye sukube. Ngelo xesha ukwenzela ukuphucula umgangatho kwinkqubo pump oluludaka, impompo JP wazisa iteknoloji entsha ezilahlekileyo amagwebu eyahlulayo. Esebenzisa le ndlela, lo uburhabaxa umphezulu umtyhido unako ukufikelela Ra3.2 ukuba 12.5μm; ubukhulu ukulahlwa unako ukufikelela CT7 ku-9; isibonelelo machining ubuninzi ngu 1.5 ukuya 2mm. Ukulahlwa Akukho flash, burr kunye uyilo, oqinisekisa izinto kunye nenkangeleko iinxalenye pump oluludaka. Ifakwe iitoni ezili-1, iitoni 2, iitoni 5 rhoqo eliphakathi eziko, sinako ukuvelisa iitoni 8-10 bephosa kanye ixesha. workshop unyango Ubushushu eliqeqesha ababini 20 ukuxhathisa-uhlobo ezikweni cc unyango ubushushu. Uninzi izixhobo kunomatshini CNC kwi workshop machining, kwaye kukho 4.2M ne 4.5m lathe nkqo kwaye ngaphezu kwama-20 izixhobo units machine. Ukongeza, kukho iindidi ezahlukeneyo izixhobo bakuwufunqula, ukusika intsimbi kunye nezixhobo iintsimbi, izixhobo wasele kwinqanaba impeller, izixhobo ukubumba, sandblasting ipolishi izixhobo ukuqinisekisa amandla emveliso.
impompo JP iphumeza ngokupheleleyo inkqubo yolawulo ISO9001 nogcina inkqubo lokuhlolwa. okuhlolwa Quality ziyafumaneka kuzo zonke iinkqubo zemveliso. izixhobo zobungcali ziquka spectrometer, analyzer metallographic, isici tshin, umatshini uvavanyo ngoomatshini (uhlobo, impembelelo, lukhuni), flowmeter magnetic, yepresha, ammeter, ukungcangcazela imitha, imitha ingxolo, igophe hydraulic umfuniselo software yobungcali. ubhaqo Perfect kuqinisekisa umgangatho izixhobo ukuqinisekisa ukuba kwimibhobho yeempompo ngamnye kunye izahlulo ngokupheleleyo ngokuhambelana neemfuno.
impompo JP iye esizigubungeleyo zonke kwimarike yasekhaya e-China phezu kumaphondo-30 kunye nomasipala. Kwakhona iye isetyenziswe ngempumelelo kumazwe 20 kubasebenzi behlabathi umgca .U babe namava obungcali ukubonelela ngeenkonzo kubathengi. inkonzo Pre-intengiso: idityaniswe kunye neemeko ezikhoyo zokusebenza, singakwazi ukubonelela ngeenkonzo Consulting kunye nesicwangciso yoyilo enengqondo. Xa intengiso iinkonzo: umthengi ebomini, sibonelela kuhlolwa, kweliso kanye ukuguqulwa nesicwangciso soyilo. Emva-sale nkonzo: thina Ukubonelela ngeenkonzo ezibanzi kuquka ufakelo kokugunyaziswa izixhobo, uqeqesho lwabasebenzi, abaza kuzisebenzisa unikezelo kunye nezinye iinkonzo.
Ingqiqo Uphuhliso Enterprise :
Kuba iimveliso: njengoko eziqinileyo njengoko amatye
Kuba emarikeni: ezintsha ngempumelelo
Kuba umthengi: gqolo
impompo JP sele kokulandela ingqibelelo, ezintsha, ukusebenza, umoya intsebenziswano "ukudala ixabiso kubathengi" ifilosofi ishishini. abahlobo wamkelekile ukuba utyelele i mveliso kwaye sijonge phambili ekusebenzisaneni nani ukudala ikamva elingcono.